ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သုံးလခွဲသာ မိခင်ဗိုက်အတွင်း နေခဲ့ရပြီး လူလောကထဲ ကျန်းမာစွာရောက်လာတဲ့အံ့ဖွယ် ခလေး ငယ် – Cele Channel
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သုံးလခွဲသာ မိခင်ဗိုက်အတွင်း နေခဲ့ရပြီး လူလောကထဲ ကျန်းမာစွာရောက်လာတဲ့အံ့ဖွယ် ခလေး ငယ်
Posted on January 2, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
ခြေမထက် ခြေညှိုးရှည်တဲ့သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ဆိုတာ
Posted on November 9, 2017 Author Cele
ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက်ရှည်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုလူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ယောကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုလူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့။သူတို့ဟာ ချစ်ပြီဆိုလဲ သူများနဲ့မတူသလို မုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်ကြည့်တတ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ ၁။ အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ ၂။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။ ၃။ ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။ ၄။ ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။ ၅။ စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။ ၆။ အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး။ ၇။ သူများအားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့မမေ့တတ်ဘူး။ ၈။ လူချစ်လူခင်ပေါသလို မနာလိုသူလည်း ပေါများတယ်။ ၉။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ် လုပ်ချင်တာကို ကြိုးစားလုပ်တတ်တယ်။ ၁၀။ ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်။ […]
ကမ္ဘာ​ပေါ်က ရှားရှားပါးပါးရှိနေသေးတဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများ
လူတ်ုင်းဟာ သူတို့နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် ဒေသအလိုက် အယူဝါဒတွေမတူညီကြပါဘူး။လူတိုင်းဟာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာအရပ် ကိုယ်ယုံကြည်ရာပုံစံနဲ့ နေထိုင်မှုတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်။ 1: Bullet ant gloves. ကျည်ဖူးတေါလို့ ခေါ်တဲ့သတ္တဝါတွေဖမ်းထားတဲ့ သစ်ရွက်လို လှိုဏ်တွေဖြစ်ပါတ.ယ်။ဒါဟာ အမေဇုန်မှာ ပြင်းထန်းတဲ့ အဆိပ်ရှိသတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။သူ့တို့ကို ဆောာင်းပြီး ကပြတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေဟာ သူရဲကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2: Hindu Thaipusam festival piercings. အိန္ဒိယရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူက တမီလ်လူမျိုးတွေလဲ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ဝတ်ပြုသူတွေဟာ အစားမစားပဲ သူတို့ခန္ဓာသန့်ရှင်းရေးကို အရင်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အချွန်အတက်တွေစိုက်ကာ ယုံကြည်မှုကို သက်သေပြတဲ့ ပွဲတော်ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ 3: Night hunting in Bhutan. ဘိုမီနာလို့ ခေါ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်ဟာလည်း ဒီလိုပါပဲ။သူတို့ဟာ Bhytan ရဲ့ […]
ဓာတ်ပုံထဲမှာ အလှဆုံးဖြစ်နေစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
Posted on December 8, 2017 Author Cele
ဓာတ်ပုံလှလှရိုက်တာ အခုခေတ်မိန်းကလေးတွေကြားမှာ Trend တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီနော်။ ဓာတ်ပုံ ပို့စ်လှလှလေးတွေပေးပြီး ဓာတ်ပုံလှလှလေးရိုက်လို့ အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ရိုက်နေကျသူတွေ ပို့စ်ပေးတတ်တဲ့သူတွေကတော့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် ပို့စ်မပေးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ခါးကို ဒီလိုထောက်ပါ။ ၂။ လက်ကို လည်ပင်းကို ကိုင်မယ့်အစား မေးရိုးနဲ့ပါးပြင်ကို အခုလို ခပ်ဖွဖွလေး ထိပေးထားလိုက်ပါ။ ၃။ ပါးပေါ် လက်ကို ဒီလိုလေး တင်ထားမယ်။ ၄။ ခါးလေး တစ်ဖက်ထောက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်။ ၅။ ခါးတစ်ဖက်ထောက်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကို အခုလို ထားမယ်။ ၆။ ခါးတစ်ဖက်ထောက်ထားပြီး စတိုင်လ်ကျကျလေး ဒီလိုရိုက်မယ်။ ၇။ လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ မျက်နှာပေါ် ဒီလို တင်မယ်။ ၈။ ကိုယ်ဟန်အချိုးအစား ပေါ်စေဖို့ ဒီလိုရိုက်မယ်။ ၉။ ပိုပြီး […]
၂၀၁၇ အတွင်း ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး ကိုရီးယားမင်းသမီး ၁၀ ဦး